होम आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् खाना र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू | Safal Khabar
होम आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् खाना र स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
शनिबार, १८ बैशाख २०७८, १५ : ५७
काठमाडौं । मुलुकमा कोरोना अनियन्त्रित हुँदैछ । दैनिक हजारबढी संक्रमितको संख्या थपिएसँगै सरकारले समेत केही गतिविधिमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था सुरु गरेको छ । संक्रमितको लागि स्वास्थ्य संस्थामा क्षमता अभावको विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि अस्पतालको अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । तर घरमा नै आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ?
– प्राय: तपाईंको कोठाको ढोका बन्द राख्नुहोस् ।
– खाना दिन आउने बेलामा बच्चा र वृद्धहरू भन्दा पनि उमेरदार मान्छेलाई खाना दिन बोलाउनुहोस् ।
– खाना खाइसकेपछि भाँडा माझ्नुहोस् र सरसफाइ गर्नुहोस् ।
१४ दिनपछि चिकित्सकको सल्लाहमा परिवारका सदस्यलाई भेट्ने र पुरानै दैनिकीमा फर्किन सक्नुहुनेछ। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि बीचबाट पुन: प्राप्त गर्नुको मतलब तपाईं आराम गर्नुहुन्न।